Jesu Anopa Chidzidzo paPaseka Yake Yekupedzisira | Upenyu hwaJesu
MATEU 26:20 MAKO 14:17 RUKA 22:14-18 JOHANI 13:1-17
JESU ANODYA PASEKA YAKE YEKUPEDZISIRA NEVAAPOSTORA VAKE
ANOPA CHIDZIDZO PAANOGEZA TSOKA DZEVAAPOSTORA
Petro naJohani vatosvika kuJerusarema kwavatumwa naJesu kuti vanogadzirira Paseka. Jesu nevamwe vaapostora 10 vanozoteverawo. Jesu nevadzidzi vake vanodzika muGomo reMiorivhi, vachiona zuva rava kunanzva miti nechekumavirira. Aka ndiko kekupedzisira kuona Jerusarema ari panzvimbo iyi kwakachena kutozosvikira amutswa.
Pasina nguva, Jesu nevadzidzi vake vanopinda muguta uye vanoenda kumba kwavachanodyira Paseka. Vanokwira muimba yepamusoro mavanowana vagadzirirwa zvinhu zvese. Jesu anga achitarisira zvikuru chiitiko ichi sezvinooneka mumashoko ake ekuti: “Ndanga ndichida kwazvo kudya paseka iyi nemi ndisati ndatambura.”—Ruka 22:15.
Makore akawanda apfuura, pane tsika yakatangwa paPaseka yekuti kapu dzewaini dzinotenderera muvanhu, anenge anwa achitambidzawo mumwe. Saka Jesu paanotambidzwa kapu anonyengetera ozoti: “Itorei muipfuudze kune mumwe nomumwe pakati penyu; nokuti ndinokuudzai kuti, Kubvira zvino handichanwi zvakare zvibereko zvomuzambiringa kusvikira umambo hwaMwari hwasvika.” (Ruka 22:17, 18) Zviri pachena kuti rufu rwake rwava pedyo.
Vari pakati pekudya Paseka kudaro, chimwe chinhu changa chisingatarisirwi chinoitika. Jesu anosimuka obvisa nguo dzake dzekunze otora jira. Anobva aisa mvura mumudziyo uri pedyo. Kazhinji munhu anenge akoka vaenzi ndiye anofanira kuona kuti vagezwa tsoka, zvimwe nemushandi. (Ruka 7:44) Asi nhasi hapana anganzi ndiye avakoka saka Jesu pachake anoita basa iri. Izvi zvaigona kunge zvaitwa nemumwe wevaapostora, asi vese vanoramba vakangogara. Kuti mumwe nemumwe wavo achiri kuzviona semukuru kune vamwe here? Hameno, asi vanonyara chaizvo Jesu paanovageza tsoka.
Jesu paanosvika pana Petro, muapostora uyu anoramba kugezwa achiti: “Chokwadi hamungambogezi tsoka dzangu.” Jesu anopindura achiti: “Kana ndikasakugeza, hauna mugove neni.” Petro anopindura achiratidza kunetseka achiti: “Ishe, kwete tsoka dzangu chete, asiwo maoko angu nomusoro wangu.” Mhinduro inopiwa naJesu inofanira kumushamisa chaizvo yekuti: “Uyo ashamba muviri anofanira kugezwa tsoka dzake chete, nokuti akachena muviri wose. Imi makachena, asi kwete mose.”—Johani 13:8-10.
Jesu anogeza tsoka dzavo vose vari 12, kusanganisira dzaJudhasi Iskariyoti. Apfeka nguwo yake yokunze anogara patafura, obvunza kuti: “Munoziva here zvandakuitirai? Munonditi, ‘Mudzidzisi,’ uye, ‘Ishe,’ munotaura nomazvo, nokuti ndizvo zvandiri. Naizvozvo, kana ini, kunyange ndiri Ishe noMudzidzisi, ndageza tsoka dzenyu, nemiwo munofanira kugezana tsoka. Nokuti ndakuitirai muenzaniso, kuti, sezvandakuitirai, muitewo saizvozvo. Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Muranda haasi mukuru kuna tenzi wake, uyewo akatumwa haasi mukuru kune akamutuma. Kana muchiziva zvinhu izvi, munofara kana muchizviita.”—Johani 13:12-17.
Ichi chidzidzo chakazonaka chokushumira vamwe tichizvininipisa! Vateveri vaJesu havafaniri kungoda kuva pamberi, vachifunga kuti vanokosha uye vanofanira kushumirwa. Vangasaita havo tsika yekugeza tsoka dzevamwe sezvakaitwa naJesu, asi vanofanira kumutevedzera pakuva nechido chekushumira vamwe vachizvininipisa uye vasingasaruri.
Pavanenge vachidya Paseka, Jesu anotaura mashoko api anoratidza kuti rufu rwake rwava pedyo?
Nei zvichishamisa kuti Jesu anogeza tsoka dzevaapostora vake?
Jesu ari kudzidzisa chii paanoita basa rakaderera rekugeza tsoka dzevaapostora vake?